Madaxweyne Trump Oo Shuruud ku xidhay Wadahadalka dhex-mari doona Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi | HAYAAN NEWS
Madaxweyne Trump Oo Shuruud ku xidhay Wadahadalka dhex-mari doona Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi
Washington(Hayaannews):- Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dalkiisa uu qarka u saaran yahay inuu heshiis la gaaro Kuuriyada Waqooyi. Hadalkan ayuu jeediyay maalin ka dib markii uu aqbalay inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi.
Mar sii horreysay madaxwayna ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Go’aanka Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan in hogaamiyahooda uu la kulmo madaxwayne Donald Trump ay tahay mid muujinaysa in takoorka iyo cadaadiska uu Mareykanka ku hayo uu shaqeeyay.
Mr Pence ayaa sheegay in Mareykanka ay sii wadi doonaan cadaadiska lagu hayo Pyongyang ilaa laga hirgalinayo hadafka ah in ay ka talabaxdo barnaamijkeeda hubka Niyukleerka.
Dhanka kale, Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in aysan jirin waqti iyo goob cayiman oo loo asteeyay inay ka dhacaan wadahadalada la sheegay inay dhexmari doonaan madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka, Sarah Sanders, ayaa sidoo kale ku gacan seyrtay in madaxweyne Trump uu aqbalay casuumaada ay fidisay xukuumadda Pyongyang shuruud la’aan. Mar sii horeysay Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Heshiis lala gaaro Kuuriya Wuqooyi uu yahay mid muhiim ah.
Balse madaxwayne Trump ayaa sheegay in cunaqabataynta saaran Kuuriya Waqooyi ay sii socon doonto. Hogaamiyayaasha kala duwan ee caalamka ayaa iyagu soo dhaweeyay wadaxaajood dhexmara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka.